Umaki: izidingo zokwakha | Martech Zone
Maka: izidingo zokwakha
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 23, i-2021 ULwesihlanu, May 7, 2021 Douglas Karr
Kuyangixaka ukuthi Abakhangisi be-B2B bavame ukuhambisa inqwaba yemikhankaso futhi bakhiqize ukusakazwa okungapheli kokuqukethwe noma izibuyekezo zemidiya yezenhlalo ngaphandle komtapo wolwazi wokuqukethwe okhiqizwe kahle wonke amathemba awufunayo lapho ecwaninga umlingani wabo olandelayo, umkhiqizo, umhlinzeki , noma isevisi. Isisekelo sokuqukethwe kwakho kufanele sondle ngokuqondile uhambo lwabathengi bakho. Uma ungakwenzi… futhi izimbangi zakho zenza… uzolahlekelwa ithuba lakho lokusungula ibhizinisi lakho
Izigaba Eziyisithupha Zohambo Lomthengi we-B2B
NgoMsombuluko, Februwari 1, 2021 NgeSonto, ngoFebhuwari 7, 2021 Douglas Karr
Kube nezindatshana eziningi ohambweni lomthengi eminyakeni embalwa edlule nokuthi amabhizinisi adinga kanjani ukuguqulwa ngamadijithali ukuze ahambisane nezinguquko ekuziphatheni komthengi. Izigaba umthengi ahamba kuzo ziyisici esibucayi secebo lakho lokuthengisa nokumaketha ukuze uqinisekise ukuthi unikezela ngolwazi kumathemba noma kumakhasimende ukuthi alufuna nini futhi nini. Ekubuyekezweni kwe-CSO kaGartner, benza umsebenzi omuhle wokuhlukanisa izingxenye